China Flat Top Kabuki Hexagon Oke-njupụta otutu na-arụ ọrụ na-enweghị ntụpọ ntụpọ ahịhịa ahịhịa ahịhịa etemeete ahịhịa na-emepụta ihe na onye na-ebubata ya | Dongmei
Flat Top Kabuki Hexagon Njupụta dị ọtụtụ nke na-arụ ọrụ na-enweghị ntụpọ ntụ ntụ ntụ ntụ ahịhịa ahịhịa.
Nhazi pụrụ iche: Petal-Shaped Makeup Brush bụ nnukwu ngwakọta ngwakọta, ịdị arọ dị arọ, na-adigide, njigide nkasi obi. Ọ dị mma ijide ahịhịa etemeete, ma na -etinye ya na ngwụcha enweghị nkebi. Ihe njide ihe etemeete etemeete dị mfe.
2. ahịhịa dị elu zuru oke maka etemeete ịnweta: dabara n'ụzọ zuru oke na okpu nke ịnweta ịnweta.
3. a na-ejikarị eme ihe: Ọ bụ brushes etemeete nwere ọtụtụ ọrụ maka ntụ ntụ, ntọala, anwụrụ ọkụ na ọbụna anya anya.
4. Nkasi obi na akpụkpọ ahụ: Mmetụta ọfụma zuru oke, dị mfe iji, bristles synthetic nwere super plush, dị larịị, enwere ike iji ya ogologo oge, dị mma maka akpụkpọ ahụ nwere mmetụta.
Mikuku Plastic ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dịka mkpa onye ahịa si dị
- Ọdịiche: Ezubere ya maka ntụ ntụ na ịchafụ ọtụtụ akụkụ, bristles sịntetik dị nro, na -enye nkasi obi kachasị, na -enye otu ngwa na ezigbo ngwa, na -enyere aka ịmepụta anya zuru oke.
- Ọkpụkpụ dị elu: mmetụta zuru oke zuru oke, dị mfe iji, bristles synthetic nwere super plush, dị larịị, enwere ike iji ya ogologo oge.
- Ọ dị mfe ịsacha: Kabuki uki ahịhịa bụ ahịhịa etemeete ọkachamara ejiri aka mee nke na -ehicha ya mgbe niile ka ọ gbatịkwuo ahụike nke ahịhịa wee gbochie ịwụfu oke.
- Ọ dị mfe iburu: ahịhịa Kabuki nwere ọmarịcha ụdị petal, zuru oke maka njem ma ọ bụ njem. A ga-enwerịrị ahịhịa etemeete maka ọkachamara ma ọ bụ iji ụlọ.
- Nkwa dị mma: Dongshen na-enye brushes etemeete dị elu. Anyị kwenyere na ịma mma si n'aka anyị niile. Emebere ngwaahịa anyị iji mee ka ịma mma nke ime gị na -enwu, ha nwekwara ike iji ya dị ka onyinye maka ndị nne, ndị hụrụ ya n'anya na ụmụ agbọghọ n'ụbọchị ezumike.
1. Tinye ọkara iko mmiri ọkụ na iko.Poem n'ime ihe ịsa ahụ wee gwakọta nke ọma.
2. Na-emikpu isi na mmiri wee gbanye nkeji 3-5.Tụgharịa, hichaa ya. Jide bristles n'ọbụ aka gị, ma kwughachi ụzọ njide na mwepụta iji wepu nsị nsị na etemeete na bristles.
3. Jiri mmiri oyi sachaa, were akwa nhicha akwụkwọ were kpoo mmiri ahụ ntakịrị, hapụ ya ka ọ kpọọ nkụ n'ebe ikuku na -eku ume.
Nke gara aga: Akwa dị nro dị larịị ma sie ike dị larịị sịntetik ntutu osisi ejiri etemeete founda
Osote: Flat Top Kabuki Hexagon Face Blush Liquid Powder Foundation Brush maka Ngwakọta Liquid Foundation
Ntucha ahịhịa ahịhịa aka
Ncha etemeete nke ika
Nịm etemeete ahịhịa
Eco-enyi na enyi elu-edu sịntetik ntutu osisi ...
Dongshen elu mma ọcha osisi handle synth ...
Elu àgwà nro na ok ewepụghị n'elu sịntetik ...
Mee Ncha, Ịkpụ afụ ọnụ, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Nịm etemeete ahịhịa, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete,